Iyo Njodzi dzeMafoni, Makomputa & Tekinoroji inozivikanwa pasi rese
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Iyo Njodzi dzeMafoni, Makomputa & Tekinoroji inozivikanwa pasi rese
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Technology • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Saudi Arabia haisi kungova mutungamiri muindasitiri yepasirese yekufambisa uye yekushanya inokwezva masangano, zvirongwa zvekuve nedzimbahwe muhumambo, asi King Abdulaziz Center yeWorld Culture iri kunetsekanawo nekukanganisa tekinoroji nyowani pamusoro pehunhu hwepfungwa dzemunhu- kuve, uye kwemhuri.
Sezvo nyika ichichinjika kune yepashure-denda chokwadi chinotungamirwa nehunyanzvi, kunetsekana kweruzhinji nezve njodzi dzekuwedzeredza-kunwa kuri kuungana kumhanya.
Sekureva kweongororo nyowani nyowani kubva kuSaudi Arabia-yakavakirwa tsika tsika, Ithra, vangangoita hafu (44%) yevanhu vese vari kunetsekana nezve kukanganiswa kweinternet uye kushandiswa kwe smartphone pahutano hwavo.
Pachiitiko chekutanga chirongwa chavo chedhijitari - Sync, Ithra yakazivisa hurongwa hwemusangano wepagore wepasi rose, uchaitika muna Zvita.
Maererano neongororo, huwandu hukuru (88%) yevakabvunzurudzwa pasirese vanobvuma kuti tekinoroji inogona kuve simba guru rekufambira mberi, nezvakakosha zvakakosha kusanganisira kuwana nhau, kubatana uye nerusununguko.
Mazhinji emabhenefiti aya akaunzwa kumusoro nekupararira kwe COVID-19, iine 64% yekuonga tekinoroji nekubatsira kurwisa denda. Mhedzisiro, zvisinei, ndeyekuti anenge munhu wese (91%) ari kushandisa yakawanda nguva online semhedzisiro.
Abdullah Al-Rashid, Director weIthra's Dhijitari yekuita zvakanaka chirongwa inoti: “Sesangano rakazvipira kupfumisa wega, isu kuIthra tinoda kunzwisisa zvinoitika mutsika nekukura kwevanhu kuvimba neinternet nevezvenhau. Nehurombo, kutsvagurudza kwedu kunoratidza kuti hafu yevanhu vese vanotenda-kuvimba-nemapuratifomu aya kuri kukanganisa hupenyu hwavo.
Ichi ndicho chikonzero isu tiri kuvhura Sync - chirongwa chitsva chakagadzirirwa kusimudzira ruzivo nezvehupenyu hwemadhijitari, kutsigira kutsvagurudza kwenhau mukubatana nemasangano epasi rese, nekubatanidza vatungamiriri vepfungwa pasi rose kuti vawane nzira itsva dzekuchengetedza veruzhinji. "
Simba rine simba rekuita zvakanaka!
Inodzikamiswa nekuwedzera kunetseka
Kunyangwe ichi chiitiko chakanakisa, zvakawanikwa naIthra zvinoratidza kushushikana kwakanyanya pamusoro pemhedzisiro inokanganisa yekuwana mukana.
Pane zve ukama, 42% yevakabvunzwa vanotenda kuti tekinoroji inoderedza nguva inopedzwa nevadiwa, uye vanopfuura chetatu (37%) vanozvipa mhosva yekukanganisa mitsara pakati pebasa nehupenyu hwemagariro. Kuva nevabereki kunokanganiswawo, paine 44% yevanhu vane vana vanobvuma kuvabvumira kushandisa komputa kana smartphone vasina anotarisirwa. Aya manhamba akatokwirira muNorth America (60%) uye Europe neCentral Asia (58%).
Kutendeukira kune tekinoroji kukanganisa pa utano, hafu (44%) yevanhu vese vanoti vane hanya. Vakapindura muSub-Saharan Africa neSouth Asia vanoratidzika kunge vanonetsekana, ne74% uye 56% zvichiteerana vachitya zvakaipa zvinokanganisa internet pahutano, zvichienzaniswa ne27% chete muEurope neCentral Asia. Sezvineiwo nekuwedzera kwekushandisa kwechikwata, vanhu vadiki vari kutarisana nezviratidzo zvemuviri kupfuura vakuru vavo: 50% yeGen Z vakapindura vanogunun'una nezve kuneta, kusarara zvakanaka uye kutemwa nemusoro nekuda kwekushandisa kwedhijitari.
Vanenge hafu (48%) yevakabvunzwa vari kushandisa nguva yakawanda online kupfuura zvavaizoda, ne41% vachibvuma kuwana zviratidzo zvekubvisa vasina kuwana zvishandiso zvavo. Kurara kwekutadza zvakare inyaya yakakosha, iine 51% yevakapindura vachisvetuka kurara vhiki rega rega, uye mumwe muvana (24%) zuva nezuva, kushandisa tekinoroji.
Kuzvipira kuisa pamberi pekugara kwedigital
Achiziva yenguva refu-ingangoitika mhedzisiro yemaitiro aya, Ithra iri kusimudzira chirongwa chesaina - Sync - kutsigira nekusimudzira kuyedza kukoshesa hupenyu hwedigital.
Izvi zvinosanganisira hurukuro yekusiyirana muna Zvita 2021, kuunza pamwechete vatungamiriri vepasirese kufunga, masangano, vanokurudzira, neruzhinji kuti vazivise nezvekunetseka kwehupenyu hwemadhijitari, uye kugadzira mazano matsva ekudzivirira vashandisi venhau yedhijitari pasirese.
Kuti uwane zvimwe, shanya https://sync.ithra.com/
Iyo King Abdulaziz Center yeWorld Culture (Ithra) ndeimwe yenzvimbo dzine mukurumbira dzemagariro eSaudi Arabia, inzvimbo yekuda kuziva, vagadziri, uye vanotsvaga ruzivo. Kuburikidza neanoteedzana akateedzana ezvirongwa, zvesimba, kuratidzira, zviitiko uye zvirongwa, Ithra inogadzira zviitiko zvepasirose munzvimbo dzayo dzeruzhinji. Izvi zvinounza pamwe tsika, hunyanzvi, uye ruzivo nenzira iyo yakagadzirirwa kukwezva kune wese munhu. Nekubatanidza zvisikwa, zvinonetsa maonero uye nekushandura mazano, Ithra inodada nekukurudzira vatungamiriri vetsika nezveramangwana. Ithra is Saudi Aramco's flagship CSR danho uye nzvimbo hombe yetsika yehumambo, inosanganisira Idea Lab, Raibhurari, Cinema, Theatre, Museum, Energy Exhibit, Great Hall, Children's Museum uye Ithra Tower.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanya: www.naita.com.